Bangiga Shiinaha wuxuu ku dhawaaqay dhammaan heshiisyada crypto inay yihiin sharci -darro, shilalka Bitcoin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Bangiga Shiinaha wuxuu ku dhawaaqay dhammaan heshiisyada crypto inay yihiin sharci -darro, shilalka Bitcoin
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Crime • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Is -weydaarsiga lacagaha qalaad ee dibedda ee adeegsada internetka si ay ugu fidiyaan adeegyada dadka deggan gudaha ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa dhaqdhaqaaq maaliyadeed oo sharci -darro ah.
Hay'adaha maaliyadeed iyo hay'adaha lacag-bixinta ee aan bangiga ahayn ma bixin karaan adeegyo waxqabadyo iyo hawlgallo la xiriira lacagaha dalwaddii ah.
Hantida dhijitaalka ah ee lambarka koowaad ee adduunka ee suuq -geynta suuqa ayaa hoos uga dhacday 5% ilaa ka hooseysa $ 42,000.
Cryptocurrencies kale waxay raaceen isbeddelka hoos u dhaca iyada oo ether uu hoos ugu dhacay 10% oo ka hooseeyay $ 2,800, halka dogecoin ay ku burburtay in ka badan 8% illaa $ 0.20.
Bangiga Dadweynaha ee Shiinaha ayaa ku dhawaaqay qorshayaal lagu mamnuucayo hay'adaha maaliyadeed, shirkadaha lacagta iyo shirkadaha internet -ka inay fududeeyaan ganacsiga cryptocurrency, iyo sidoo kale in la xoojiyo la socodka khataraha dhaqdhaqaaqyada ganacsiga cryptocurrency.
FILE PHOTO: Sawir -gacmeed yar oo toy ah ayaa lagu arkay wakiillada lacagta dalwaddii ee Bitcoin oo lagu soo hor bandhigay sawirka calanka Shiinaha ee sawirka sawirkan, Abriil 9, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Xeer -ilaaliyaha Shiinaha ayaa ku celiyay mowqifkiisii ​​adkaa ee lacagaha dijitaalka ah maanta, isagoo ku dhawaaqay dhammaan dhaqdhaqaaqyada ganacsiga cryptocurrency inay yihiin sharci -darro oo ka mamnuucaya is -weydaarsiga dibedda ee crypto inay adeegyo siiyaan maalgashadayaasha Shiinaha.
“Is -weydaarsiga lacagaha qalaad ee dibedda ee adeegsada internetka si ay ugu fidiyaan adeegyada dadka deggan gudaha ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa dhaqdhaqaaq maaliyadeed oo sharci -darro ah,” Bangiga Dadka ee Shiinaha lagu dhajiyay mareegaha
"Hay'adaha maaliyadeed iyo hay'adaha lacag-bixinta ee aan bangiga ahayn ma bixin karaan adeegyo waxqabadyo iyo hawlgallo la xiriira lacagaha dalwaddii ah," ayuu yiri bangiga dhexe.
Tallaabadan ayaa u dirtay bitcoin iyo lacagaha kale ee dalwaddu hoos u dhacayaan. Hantida dhijitaalka ah ee lambarka koowaad ee suuq -geynta suuqa, Seeraar, wuxuu hoos uga dhacay 5% wuxuuna ka hooseeyay $ 42,000. Cryptocurrencies kale waxay raaceen isbeddelka hoos u dhaca iyada oo ether uu hoos ugu dhacay 10% oo ka hooseeyay $ 2,800, halka dogecoin ay ku burburtay in ka badan 8% illaa $ 0.20, sida laga soo xigtay websaydhka Coinmarketcap.
Xukunkii ugu dambeeyay wuxuu ku soo beegmay iyada oo qayb ka ah olole ballaaran oo ay dowladdu maamusho oo ay maamulaan Shiinaha oo ka dhan ah cryptocurrencies. Bilowgii sannadkan, Beijing waxay mamnuucday macdanta xarumaha waaweyn ee bitcoin, sida Sichuan, Xinjiang iyo Inner Mongolia, taas oo horseedday hoos u dhac xoog leh oo ku yimid awoodda wax -qabadka ee bitcoin, maadaama macdan -qoreyaal badan ay qalabkoodii ka qaateen khadka tooska ah.